Nagal soor xiriir
Ujeedada ururka Somali Community Center of Colorado: waxa ay ku saabsantahay:
Caawinta dadka Soomaaliyeed ee dagan gobolka Colorado, khaas ahaan, dadka daggan magaalada Denver iyo agagaarkeeda. Waxaan ka caawinaa bulshada arimo dhaqan ahaaneed, bulsho ahaaneed, iyo luqad ahaaneedba, anagoo waliba ufidinna bulshada reer Denver mashaariic kla duwan oo xasaasi ah.
Waxaa la aasaasay ururkaan (SCCC) sanadkii 1999, waxaana loo aasaasay wacyi galin dhaqan iyo horumarinta waxbarashada ummadda Soomaaliyeed ee daggan magaalada Denver iyo nawaaxigeeda. Waxaa kale oo ururka loo abuuray in uu caawiyo qoysaska Soomaaliyeed ee qaxootinimada ku soo galay gobolka Colorado.
Ururka Somali Community Center waa urur samofal ah oo ka diiwaan gashan hay’adda gobolka Colorado, iyo dowladda guud ee dalka Maraykankaba. SCCC waxa ay leedahay aqoonsiga loo yaqaan IRS Code (501) (c) (3). Shaqaalaha SCCC waxa ay isugu jiraan kuwo khibrad iyo aqoon uleh luuqado kala duwan, maamul, iyo arimo bulsho, intaba. Guddiga sare ee Ururku waxa uu ka koobanyahay: ganacsato, aqoonyahanno, iyo odayaal soomaaliyeed oo ka kala yimid dhammaan beelaha Soomaaliyeed.